तलाईं रण्डी जहाँ पायो त्यहीं ठोकाउन चाँही हुन्छ मेरो चुस्न चाँही हुँदैन ? - Kathmandu Online
तलाईं रण्डी जहाँ पायो त्यहीं ठोकाउन चाँही हुन्छ मेरो चुस्न चाँही हुँदैन ?
Admin — November 30, 2017 in Uncategorized • add comment
फ्ल्याटमा पुग्दा संगु तयार भएर बसिरहेकी थिई । संगुले यतिखेर कालो मिनी स्कर्ट र स्टकिन्स अनि छोटो टि-शर्ट (जुन टी-शर्टले उसको बुब्सको माथिल्लो आधा भाग र बुब्स मुनि दुई उम्मल मात्र छोप्थ्यो) मा हाइहिल लगाएर बसिरहेकी थिई । टि-शर्ट हल्का पातलो भएकोले संगुको ब्राको रातो कलर ठम्याउन सकिने खालको थियो भने बुब्स मुनिदेखि नाईटोको निकै मुनि सम्म उसको पेटको भाग खुल्ला थियो ।
समग्रमा भन्दा संगु निकै हट र प्वाँट देखिएकी थिई, उसलाई देख्दा जो कोहिको पनि लाँडो ठन्किन्थ्यो ।
मैले उसलाई बाइकमा राखेर गोदावरीतिर हुँइकिए बाइकमा बस्दा संगु मसँग टपक्क टाँसिएर बसेकी थिई । हिजोको जस्तै गरि मैले गोदावरीमा पनि संगुको हट हट पोजमा फोटो लिएं अनि हामी त्यसपछी फुलचोकीतिर लाग्यौं । अलि खुला ठाँउ भएको कारण मैले संगुको शरीर पुरै एक्सपोज हुनेगरि फोटो लिंए र उसको पुती देखिने गरि, बुब्स देखिने गरि बिभिन्न फोटोहरु लिएं । फोटो लिने क्रममा मैले संगुलाई पुतीमा औंला छिराएर, नाङ्गो बुब्स हातले समाएको इत्यादी फोटो पनि लिएं ।
अन्तमा एक कुनामा बसेर मैले संगुलाई लाँडो चुस्न लगाएं, एकछिनसम्म मेरो लाँडो चुसेपछी संगुले त्यही चिक्नको लागि मलाई उक्साउन थाली । त्यहाँ उसलाई चिक्न खुब मन लागेको थियो तर अन्य व्यक्तिहरु आउन सक्ने संभावनाका कारण मैले त्यसो गर्नु उचित ठानिन तर संगुले स्कर्ट माथि सारेर मेरो काखमा आएर जबरजस्ती लाँडोमाथि बसी र मच्चिन थाली ।
म चाँही चारैतिर हेरेर कोही आइहाल्छ की भन्ने तयारीमा रहें । निकैबेर संगु मेरो लाँडोमाथि मच्चिएपछी मेरो झर्ने बेला भयो “ए केटी, ल अब भयो मेरो लाँडो चुसिदे !” “अघि चुसिहालें नि अब त चिकेको लाँडो चुस्न मलाई घिन लाग्छ !” मैले संगुलाई च्याप्प समाएर भुईमा लडाएं र उसको छातीमा चाक अड्याउँदै उसको मुखमा लाँडो टाँसेर भने “तलाईं रण्डी जहाँ पायो त्यहीं चिकाउन चाँही हुन्छ मेरो लाँडो चुस्न चाँही हुँदैन ?” संगुले केही बोल्नलाई मुख खोल्न लाग्दैथिई मैले उसको टाउको समाएर लाँडो मुखमा छिराइदिए र भनें “मलाई मेरो लाँडोबाट निस्केको फुसी चखाउन हुन्छ अनि तेरो पुतीको रस तैलें चाख्न नहुने ?” अनि उसको मुखभित्र फुसी झार्न थालें, संगुले टाउको यताउता गर्दा आधा
उसको मुखभित्र आधा उसको नाक र गालातिर भयो । मैले फुसीको अन्तिम विसर्जन समेत उसको चिउँडोमा दलिदिएं । मुखभित्र झरेको फुसी निलेर संगुले मेरो लाँडो पूनः चुस्न थाली, मेरो लाँडोले हल्का आकार गुमाएपछी मैले संगुको मुखबाट लाँडो निकाले । “दादा पनि आफ्नै बहिनीलाई पनि बजारिया रण्डी जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ ? अलिकति माया गर्नु नि रण्डीलाई चिक्न पैसा तिर्नुपर्छ अनि भनेको बेलामा कहाँ चिक्न पाईन्छ, म त तपाईकै माल त हो नि ? न त पैसा तिर्नुपर्ने न त खोज्दै हिँड्नुपर्ने अलि माया गर्नु न ?” त्यसपछी मैले उसको गालामा नाकमा लागेको फुसी चाटेर आफ्नो जिब्रोमा ल्याउँदै संगुको मुखभित्र पुर्*याउने काम गरें । “हेर केटी, बाहिर पब्लिक ठाउँमा चिक्दा अलि बिचार पुर्*याउनु पर्छ, तँ मेरो पर्सनल माल पो हो त पब्लिक माल त होइन नि ?” अनि जोडले पोका खेलाइदिदै फर्किनको लागि भने । फुलचोकीको घुमाइपछी मैले संगुलाई सातदोबाटोको एउटा रेष्टुरेण्टमा लगेर खाजा खुवाएँ र हामी फर्कियौं ।ढोका खोलेर भित्र छिर्नासाथ संगुले एकएक गर्दै आफ्नो लुगा खोल्दै गई भित्रको ढोका अगाडी पुग्दासम्म संगु नाङ्गै भइसकेकी थिई ।
उसको त्यो कृयाकलापले मलाई फेरी उसको पुतीमा छिर्न उक्साउँदै थियो, संगुले फ्रिजको ढोका खोली र पानी पिउन थाली । त्यसरी पानी पिउँदा उसको मुखबाट पानीको धार ओभरफ्लो हुँदै पोकातिर आउँदैथियो, मैले त्यो मौका नगुमाइकन उसको पोकामा झर्दे गरेको पानी पिउन थालें र पोका पनि चाट्न थालें । त्यसरी नै मेरो चटाईले संगु सन्किइसकेकी थिई, संगुले भित्तामा आड लाग्दै एउटा तिघ्रा उचालेर पुती फेस्याइदिई अनि मैले जिब्रोले उसको पुतीको टि.सी. चाटिदिन थालें । संगुले उच्चतम सित्कार भरिएको आवाज निकालेर मलाई अझै उत्साह प्रदान गरिरहेकी थिई । निकैबेर उसको पुती चाटेपछी मैले पेन्टबाट ठन्केको लाँडो निकालेर हातले हल्लाउँदै संगुलाई भनें “लौ केटी यसले पनि तेरो मुखमा रमाउँन खोजिरहेको छ ?” संगु हत्तपत्त घुँडा टेकेर भुईमा बसी र मेरो लाँडो मुखमा छिराएर आइसक्रिमका भाँति चुस्न थाली । केहिबेरसम्म संगुलाई लाँडो चुसाएपछी मैले संगुको एउटा खुट्टा उचालेर भित्तापट्टी मुख जोताएर पछाडीबाट लाँडो पुतीमा छिराएर चिक्न थालें । घरि उठेर घरि फ्रिजमा आड लागेर घरि टि-टेबुलमा सुताएर मैले संगुलाई निकैबेरसम्म चिकें अनि अन्तमा संगुको अनुहारमा फुसी
झारिदिएं । लाँडोबाट फुसी निखार्दासम्म मेरो आँखाले मुलढोका नियाल्यो, वाफ रे ढोका त खुल्लै रहेछ र ढोकाबाट बाहिर पल्लो फ्ल्याटकी केटी हाम्रो चिकाई हेरिरहेकी थिई एकोहोरो रुपमा । मैले जे त पर्ला भन्दै संगुको मुखमा फेरी लाँडो छिराएर त्यो बाहिरकी केटीलाई नदेखेझैं गर्दै चुसाउन थालें । अनि ५ मिनेट जस्तो पछी संगुलाई पोका समाएर भित्री कोठामा छिराएँ अनि बाथरुमको सावरमुनि राखेर नुहाउन थाल्यौं हामी ।नुहाइसकेपछी म कमरमा टावल बेरेर बाहिर निस्किएं र मुल ढोकामा आइपुगें त्यो केटी अझैपनि बाहिर बरण्डामा बसेर पत्रिका पढिरहेकी थिई, तर उसका आँखा मूलत: हाम्रो कोठानै नियाले जस्तो मलाई फिल भयो । मैले मन्द मुस्कान छर्दै ढोका बन्द गर्दा उसले पनि हल्का मुस्कान फिराउँदै मतिर नजर फेरी ।
मैले हत्तपत्त कपडा लगाएँ र पसल जाने बहाना गर्दै बाहिर निस्किएँ, त्यो केटी अझै पनि बाहिरै थिई । म पसलतिर लागें, अनि केहिबेरमा हातमा सामान लिएर फर्किएं । फर्किंदा पनि त्यो केटीलाई त्यहीं देखेपछी मलाई लाईन मार्न मन लाग्यो र भनें “आउनुस् संगै चिया पिउँला ?” त्यो केटी केही नबोली सरासर हाम्रो भित्र छिरी । मैले संगुलाई आवाज दिंए “संगु ! चिया पकाई त तिन कप !” “एकछिन है !” म भित्री कोठामा छिरें, संगुले ईशाराले सोधी को हो ?” मैले मसिनो स्वरमा भनें “पल्लो फ्ल्याटकी तरुनी हो ! अघि हामीले चिकेको देखेकी रै’छे ।“ “त्यसलाई पनि चिक्ने सुरमा हो कि क्या हो ?” “त्यही भएर त माहोल मिलाउन भित्र बोलाएको !” संगुले पातलो नाइटी मात्र लगाएकी थिई त्यसैले अर्को कपडा चेन्ज गर्न खोज्दै थिई “संगु ! चेन्ज नगर् न ?” अनि संगु किचनमा त्यतिकै गई र त्यो केटीलाई भित्र छिर्न आदेश दिई । त्यो केटी भित्र छिरेपछी बेडमा बस्न मैले ईशारा गरें, दुई वर्षदेखि वल्लो पल्लो फ्ल्याटमा बसेपनि उसँग चिनजान भने थिएन किनकी संगु आउनु भन्दा
अगाडी प्राय: म बिहानै निस्कन्थें र राती ढिलो मात्र फर्कन्थें । मैले सोधें “धेरै भो छिमेकी भएर बसेको तर चिनजान भा’को थिएन म राज हो …. मिडियामा पत्रकारिताको काम गर्छु ।“ “म चाँही रमा ! अहिले बिबिएस थर्ड ईयर मिनभवन क्याम्पसमा पढ्छु ।“ “तपाईसंग त अर्को एउटा बैनी पनि छ होइन र ?” “हो मेरो सानो बैनी १२ को जाँच दिएकी नासा कलेजबाट अहिले बिदामा घर गएकी छे ।“ “तपाईको घर चाहीं कता नि ?” “हाम्रो ईलाम ! ईलाम पशुपतिनगर… जानुभा’छ…” “ए ! जान त गा’को हो धेरै अगाडी… मेरो चाहीं झापा, झिलझिले हो ।“
त्यत्तिकैमा संगु चिया लिएर आइपुगी उसले चिया दिदैं गर्दा मैले भनें “यो मेरो बैनी संगीता ! (रमाको अनुहारमा विश्मय झल्किन्थ्यो) भर्खरै १२ को परिक्षा दिएर बसेकी, अब यतै बसेर पढ्ने भन्दैछे ।“ संगुले सिधै मुद्दामा प्रवेश गर्दै भनि “तपाईं त अचम्ममा पर्नु भो होला हगि ? दाजु बैनीले सेक्स गरेको देखेर ? मेरो दादाको हतियारै यति दामी छ की मनले नमानेपनि तन आफैं छिराउन जान्छ ।” रमा रातो भई, संगु रमाकै अगाडी भुईमा बसी र मेरो पेन्टको जिपर खोलेर लाँडो निकालेर खेलाईदिन थाली । खेलाउँदा खेलाउँदै संगुले मेरो लाँडो मुखमा छिराएर चुसिदिन थाली, मेरो लाँडो चुस्दै गर्दा संगु आफ्ना पोका पनि मसल्दै थिई । चुस्दाचुस्दै संगुले रमाको पोका जोडले समाउँदै भनि “आउनुस् तपाईपनि हाम्रो चिकाचिकीमा सामेल हुनुस् !” रमा सम्मोहित केही नबोली बसिरही, मैले रमाको हात समाएर मेरो लाँडोमाथि राखिदिदैं भनें “अघि हामीले चिकेको त खुब चियाई चियाई हेरिरहेकी थियौ त ?” अनि उसको मुखमा मुख जोडेर किस लिन थालें, किस लिँदा लिँदै मैले उसको पोकामा हात लगेर निचोर्न थालें ।
रमा पनि सन्किसकेकी थिई, उ नतमस्तक भएर मलाई र संगुलाई साथ दिईरहेकी थिई । म रमाको शरिरसँगै खेल्दै गर्दा संगुले टि.भी.मा ब्लु-फिल्म चलाइदिई र आफ्नो नाइटी फुकालेर नाङ्गै भई अनि रमाको कपडा खोलिदिन थाली । संगुले रमाको छाती उदाङ्गो पारेपछाडी मैले रमाको नाङ्गो पोका चुस्दै खेलाउन थालें, रमाका पोका संगुका भन्दा झण्डै दोब्बर ठुला थिए “रमा ! तिम्रो बुब्स त दामी छ यार !!! संगु यता हेर तेरो पनि यत्रै बुब्स भयो भने तँ साह्रै हट देखिन्छेस् तेरो शरिरलाई ठिक्क सुहाउँछ । बाटोमा हिंडिस् भने सबका लाँडो तेरो बुब्सको साइजले नै ठन्काइदिन्छ ।” केहिबेरमा तल हेर्दा संगुले रमाको पेन्टी खोल्दै थिई, रमाले पातलो र पुतीमात्र छोप्ने पेन्टी लगाएकी थिई संगुले रमाको पेन्टी हल्का साइडतिर सारि र पुती चाटिदिन थाली । संगुले रमाको जामा पनि खोलिदिएकी थिइन